Ego ole ka Chris Froome bara? - Chris Froome
Isi > Chris Froome > Afọ ole bụ chris froome - esi emezi
Afọ ole bụ chris froome - esi emezi
Ego ole ka Chris Froome bara?
Chris Froomenetkwesịrị:Chris Froomebụ a British ụzọ ọduọ agba ịnyịnya ígwè onye nwere a netkwesịrịnke $ 12 nde.
bikemụ nwanyị ịnyịnya ígwè
Nnukwu njegharị bụ ntachi obi na arụmọrụ ike na-etinye ihe dị elu n'aka ndị na-agba ha mgba. N'otu aka, ndị na-eme egwuregwu chọrọ nnukwu mmanụ iji nweta 'puku kilomita atọ na ọkara' na nkezi ọsọ nke ihe karịrị puku kilomita atọ na ọkara, kilomita 25 kwa elekere. Mana n'akụkụ tụgharịa, ha achọghị iri nri gabiga ókè iji mebie ikike ha na ịdị arọ, nke dị ezigbo mkpa mgbe ịgba ígwè. (Dramatic Music) Abịara m Giro d'Italiato ịmatakwu, na-agwa Nigel Mitchell okwu, EF Education First Pro Cycling Team's nutritionist, ma na-arụ ọrụ na Team Sky na UK na-agba ịnyịnya.
Nigel esorola ndị egwuregwu kachasị elu rụọ ọrụ, bụ ndị otu ụbọchị rụzuru nnukwu ihe ịga nke ọma na njegharị buru ibu, agbụrụ, ihe niile mara mma na ịgba ịnyịnya ígwè kacha elu. Yabụ ọ bụ ezigbo onye mkparịta ụka. Naanị m chọrọ ịma ma ndị ọkwọ ụgbọala ahụ nwere ike ịnwe pudding.
Ka anyị chọpụta. (Ezigbo egwu) Ezi ehihie, Nige. - Ọ dị mma ịhụ gị, Riley. - Ee, yabụ ka anyị bido ụbọchị ahụ. - Ọ dị mma. - Nri ụtụtụ.
Kedu ihe ndị na-agba ịnyịnya na-erikarị na mbido, tupu usoro ahụ? - Ee, n'ụdị nkịtị, ọtụtụ mmadụ na-eju etu nri na nri anyị na-eme ndị ọkwọ ụgbọala si adị. Anyị nwere obi ụtọ n'ihi na anyị na Olga, anyị nwere ezigbo osi nri na ọ bụ ezigbo onye otu otu. Ọ dị ezigbo mkpa.
Ọ bụ otu n'ime ndị mbụ na-ebili na otu onye nke ikpeazụ na-ehi ụra, ma ọ bụ ibu mfe. Anyị ga-ebido gị n’ihe eji ebu nri, anyị enwee porridge mgbe niile - Enwere m mmasị na porridge. (Uwe) - You na-enwekarị porridge dị ka anyị na-eme, ọ bụ naanị usoro dị mfe Olga na-eji ebe ọ bụ naanị mmiri dị mfe, ọdịnala - nke ahụ bụ ụzọ Scottish - Scottzọ Scottish, ee, mana anyị anaghị etinye wiski n'ime ya.
Anyị enweghị whiskey na ude, nke m chere na ọ bụ karịa onye Scottish omenala, nri? bụ mgbe m nọ na Scotland na agbanyeghị. Ya mere, anyị nwere porridge anyị nwekwara omelets. Were omelet mgbe niile.
Olga ga-aguta uzo ole o si enweta ya na nnukwu anyi. Ọtụtụ narị na ọtụtụ narị àkwá. Ma mgbe ahụ ihe niile anyị nwere bụ ọka nkịtị, anyị nwere chiiz, anyị nwere jam, ọ bụ naanị ihe zuru oke, ihe dị mfe. - Ee.- Anyị na-anwa ịghara ịlabiga oke nri ụtụtụ, ọkachasị n'ihi na mgbe ahụ ị na-ejupụta na sistemụ ahụ na ọtụtụ , ọtụtụ, ọtụtụ carbohydrates na ihe ị chọrọ ime bụ naanị mejupụta sistemụ ahụ.- Aka nri- Ma ọ bụ gị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ihe dị ebe ahụ nke ga-adị, wepụta oge iji gbarie na nke a bụ ya mere akwa ji dị mma maka nri ụtụtụ n'ihi na àkwá a na-agbari nwayọ nwayọ, ha na-agbakwunye protein na sistemụ kwa, dị ka nke ahụ na-enyere ndị ọkwọ ụgbọala aka mgbe ha na-agba ọsọ. Iweghachite mgbe ha na-agabiga.- Na-atụnye ụtụ mgbe niile na mgbake.- Ee, mana ọ bụ naanị nkịtị, nri dị mfe.- Ee.- Ndị mmadụ na-aga mgbe niile, 'Mba, ọ nwere ike ịbụ na ọ dị mfe ọ gaghị adị mfe.' - Enwere ụdị protein, carbohydrates, ụdị macronutrient ị na-achọ iti? - Ee, ee, yabụ ihe anyị na-achọ site na nkwupụta protein na-elekwasị anya na gram 20 nke protein, nke ruru 20 ruo 30 gram.
Kedu nke ị ga-eso nri ha nwere maka nri ụtụtụ, yabụ na ị maara, di na nwunye omelet, porridge ha na-eri, ikekwe obere ham. Nke ahụ na-enye ha gram 30 nke uru protin dị mfe, ma site na ọnọdụ carbohydrate, anyị na-achọ gram kwa paụnd nke ịdị arọ ahụ, ọzọkwa, nke ahụ dị mfe ịnweta ma na-abanye n'ime nkọwapụta. Naanị na porridge, otu obere mkpụrụ osisi, ọ dịịrị ha mfe ime ya n'ebughị ụzọ chee na ọ bụ n'echiche ahụ.
Aga m agbali iche echiche banyere servings a. Ọ bụrụgodi na anyị ga - agbada mkpanaka, ihe dịka carbohydrates. Anyị na-anwa ime ka ego ahụ kwụ ọtọ.
Nke ahụ bụ ihe dị ka gram 20 ruo 30 na nri ndị a. (Egwu na-egwu egwu) - I kwuru na ọ dị iche maka ọkwa dị mkpirikpi, dịka TT - Ee - Yabụ kedu ka esi arụ ọrụ? - Ya mere TT, otu n’ime ihe ndị dị oke egwu, otu n’ime ihe ndị dị mkpa, otu n’ime ihe ndị kachasị njọ bụ nkasi obi afọ, ma nke ahụ bụ ọnọdụ dị oke oke mgbe ị nọ na skis. Yabụ nri ọsọ ọsọ nke anyị na-eme bụ na anyị na-arụ ọrụ azụ wee dabere na mgbe ikpe ikpe bụ mana ọ na-abụkarị mgbe oge ikpe gị dị na 2am ụmụ okorobịa na-ebili ma nwee ụtụtụ ụtụtụ ma ihe dị mfe nke ịnyagharị ntakịrị, na-enyocha. na mgbe ahụ, atọ ma ọ bụ anọ awa tupu TT, e nwere tupu agbụrụ nri na tupu agbụrụ bụ mgbe niile.
Ọ bụ naanị osikapa na omelets - Mgbe anyị pụtara n’elu ikpo okwu, kedu ihe ndị na-agba ya na-eri n’oge ya? - Yabụ n'oge oge a, anyị na-achọ ịdabere n'ike, nke ahụ bụ akụkụ nke ọzụzụ nke ndị na-agba ịnyịnya ga-eche maka onwe ha n'ihi na ị nweghị ike ịgwa onye ọ bụla ka ọ nwee ọtụtụ grabs carbs kwa elekere n'ihi ike. ha nwere ike na-azụ ya mgbe ụfọdụ ị nwere ike ịnwe ndị mmadụ na-abịaghachi ma ị lelee faịlụ ike ma ha arụghị ọrụ ọ bụla ma ị nwere ụbọchị ndị ọzọ ebe ha na-aga ije n'ụzọ zuru oke oge niile yabụ gịnị ka anyị bụ? Ọ bụrụ na ị na-agba ịnyịnya na-adịchaghị mma, gbalịa na-arụ ọrụ maka ịchọta ihe dị ka gram 40 ruo 60 nke carbohydrates kwa awa. Ọ bụrụ n’ị gbalịsie ike, ọ ga-eru nso 60 ruo 80, ọbụlagodi na 100 gram kwa elekere. na ụzọ anyị si anapụta nri na igwe kwụ otu ebe dị ka usoro modulu.
Yabụ na anyị na-arụ ọrụ na ụdị sọsọ 20 gram carbohydrate, ọ bụrụ na ị ghọtara m. Dị ka achicha osikapa dị ihe dị ka gram 20 nke carbohydrates, mmanya na-adị ka gram 40 nke carbohydrates, nke ahụ bụ mgbanwe abụọ. Dabere na ihe ọ drinkụ drinkụ anyị na-eji, anyị nwere ike iji ihe ọ drinkụ drinkụ carbohydrate gram 80, yabụ nke ahụ bụ swaps anọ ka anyị na-arụ ọrụ na ụdị usoro ahụ.
Echeghị m na ndị ọkwọ ụgbọala na-aghọta nke a mgbe niile. - Eeh, mana ị n’eme ya. - Mana anyị maara, ya mere, anyị ga-aga mgbe ịnwere karama ya - S o mgbe ị nwere karama 80 gram mgbe ahụ nke a zuru oke maka otu elekere, anyị na-ejikwa carbohydrates mmiri mmiri karịa mgbe ọkwa ndị ọzọ na-arụ ọrụ aka, na ugwu mgbe o siri ike iri, ma ọ bụ emesịa na nkebi, yabụ n'oge mbido mbụ nke ogbo ahụ, dabere na ihe ndị ọkwọ ụgbọala na-eme, mgbe ahụ anyị nwere ike ịnwe karama mmiri na karama ọ drinkụ drinkụ na-agba ọsọ na karama .
Ihe ọ drinkụcingụ na-agba ọsọ bụ ọkọ na gram 20 nke carbohydrates. Ọ nwere ike bụrụ na ha ga-abụ nna ọrụ ha n'oge na-adịghị anya, ma ọ bụ na ha maara na ha ga-arụ ọrụ, yabụ anyị ga-eji gram nke gram gram 80 n'ime karama ha ka anyị wee jiri obere ihe wepụta ya. dị ezigbo mma na nri ndị anyị na-agba. Yabụ anyị na-eji ngwakọta ụlọ ahịa azụmahịa anyị na-ejikwa achicha osikapa.
Ọ bụ ịgba egwu kachasị, ewu ewu, ma na-arụ ọrụ kachasị arụ ọrụ n’ebe ahụ. (Ezumike obi uto) - Ihe m choro ikwu banyere ya bu nri nri. - Ọ dị mma, ee - nihi na ị kpọtụrụ ihe gbasara izere ịkwọ ụgbọ nri nke na - emepụta ọtụtụ njigide mmiri na eriri afọ - Ọ dị mma ọ bụghị njigide mmiri, enwere ọtụtụ nsị nke nsị, nke mere na isi ala anyị, ndị buru ibu, karịa, enwere ya, yabụ ị nwere ike ịnwe kilogram ole na ole na eriri afọ.
Echere m, ị ga-akpachara anya maka microbiome, nje, ọ dị mkpa ka anyị ghara ime ya, na anyị anaghị eji ya egwu egwu, yabụ mgbe ụfọdụ anyị na-eme ya maka ụfọdụ ọkwa ma anyị adịghị ' t mee ya oge niile na ndị ọkwọ ụgbọ ala niile, ọ bụ n'ezie mgbe ndị mmadụ na-echekarị ihe ma anyị emee, anyị na-akwado atụmatụ ala dị ala ka anyị wepu nri naanị ahụ anaghị agbari, mana ihe anyị na-eme ka ga-eme Na anyị na-enweta ụfọdụ eriri soluble iji zụọ nje, n'ihi ya, anyị anaghị ezere eriri ahụ niile, mana anyị na-anwa izere karịa ya - More o Ihe anyị nwere ike iche maka eriri nke mejupụtara Broccoli ahụ ma ọ bụ ihe yiri ya? - Ee, na, ma ọ bụ oatmeal achịcha, yabụ ọ bụ ụdị nri dị mfe ebe ọ dị maka iri ọkụkọ na osikapa ma ọ bụ azụ na osikapa, tinyezie tinye ihe ọ vegetableụ vegetableụ inine na ya.- Ọ dị mfe igwu. ihe ndị ọzọ gbasara ya bụ na, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nọ n’izu gara aga nke nnukwu njem, sistemu nri na-agbari.
Iji bụrụ onye ike gwụrụ, rie ndị ọkwọ ụgbọ ala ahụ ọtụtụ letus, ọtụtụ karịa ihe ndị mmadụ nkịtị ga-eri, yabụ site na eriri niile ị nwere ike ịnweta nsị na eriri afọ, yabụ na ihe ndị dị ka ihe ọ theụ theụ ihe oriri, n'eziokwu, itinye uche ndị na-edozi ahụ na ọtụtụ iwepu uka. (Egwú mara mma) - Olee otú nke ahụ si gbanwee kemgbe ị banyere n'ịgba ọsọ ọkachamara na ihe oriri? - Ee, echere m na enwere mgbanwe dị ukwuu. Echere m, enwere m ezigbo obi ụtọ mgbe m nọ na njem World Tour Level. bịara na-egbu oge n'ihi na m na-esonye otu egwuregwu ọhụụ ka m banye n'otu igwe ebe anyị nwere ohere ịdegharị iwu ahụ ma ọ dị obere ihe egwu na ọnọdụ ahụ n'ihi na ọdịnala anaghị egbochi anyị, yabụ anyị nwere ike ịnwale ihe anyị gbalịrị n'ezie na ihe anyị chọrọ ime nke na-arụ ọrụ ugbu a.
Ọtụtụ omume anyị ji ya eme ugbu a bụ ihe m webatara afọ iri gara aga. Ihe agagala, mana ihe anyi huru ugbua, otutu ndi otu ozo anakwerela otutu ihe omumu ndia, ya mere ihe di iche iche gabigara, ya mere otu n'ime ndi buru ibu bu ihe, ihe dika pasta nwetara n'ezie ike siri ike na ịgba ígwè eji eme ihe otutu ugbua. Ọzọkwa, ìgwè niile na-eme nke a.
Ihe ndị dị ka ịicingụ mmiri. Knowmara na ị na-agba ọsọ n'ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ ma ị hụ ọtụtụ ìgwè na-aicingụ mmiri ugbu a. Ihe dị ka achicha osikapa enweghị m ike ịnwe otuto zuru oke maka na ọ bụ n'ezie Alan Lib mere nri site n'aka nne nne ya maka Doi.
O mere ihe dịka afọ ndị gara aga, ọ bụ Brad Wiggins gwara m, sị, 'Oh Alan na-eme ụdị osisi ndị a' dị ezigbo mma na igwe kwụ otu ebe. ' Ya mere, anyị were ụfọdụ n'ime usoro nri ndị ahụ wee dozie ha ugboro ugboro ndị otu niile na-eme nke a ma ị maara, Alan na-agwa m na mgbe ọ bụ ịgba ịnyịnya ígwè na-arụ ọrụ afọ 15 gara aga, ndị mmadụ na-akwa ya emo maka ịgagharị osikapa ya. Ndị mmadụ were Mickey ma ugbu a otu ọ bụla nwere osikapa anọ ma ọ bụ ise.
Ya mere enwere mgbanwe ndị a ma echere m na elekwasị anya na mma nri dị ike karịa ka ọ dị afọ 10 gara aga. Ndị otu niile nwere osi nri. Ndị otu a na-eji onye nwere nri na-edozi ahụ arụ ọrụ maka ọrụ nri na nri na-edozi ahụ n'etiti otu ahụ.
Ogo nke ngwaahịa na-edozi ahụ abawanyela n'echiche m, mana echere m na ọgụgụ isi n'iji ngwaahịa emeela ka ọ bụrụ nke mere echeghị m na ndị mmadụ na-agba ọsọ, anyị ga-eji ogwe ndị a, anyị ga-eji gels , iji ị drinksụ ihe ọ theseụ theseụ ndị a, ugbu a anyị na-eche ihe bụ ezigbo azịza kachasị mma maka ihe anyị chọrọ ime, yabụ anyị na-eche banyere nsogbu dị na otu esi agakwuru nsogbu a, ọ bụghị ihe anyị ga-eme, na anyị dị tinye na ya tufuo ma gbalịa ime ka ọ rụọ ọrụ. (Egwú ndị na-ewu ewu) - Enwere ihe edepụtara edepụtara na ị gaghị enwe? - ofzọ m si arụ ọrụ bụ na achọghị m ụzọ mmegharị ahụ, nke ọma, nke ọjọọ. Ihe m chọrọ ịnwale ma mee dị oke, anyị kwenyere na nke a na-akwado gburugburu arụmọrụ, na-akwado nri arụmọrụ, yana nri anyị anaghị enye ndị ọkwọ ụgbọ ala, ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe ha chọrọ n'ezie mgbe ahụ ha nwere ike inweta ya mana anyị anaghị ' t machibido ya - ee. - Ọ bụrụ na ị maara ihe m chere.
Yabụ na ọkwọ ụgbọala nọrọ ebe ahụ rie nri ma ọ bụ drinksụọ mmanya, anyị agaghị ekpe ya ikpe maka ya. Nke ahụ bụ nhọrọ anyị, yabụ echere m na ọ bụ naanị otu n'ime ihe ndị anyị ga-ezere dịka otu, ma e wezụga ugwu ugwu, yabụ kwụpụrụ igwe kwụ otu ebe, anyị na-ezere ihe ndị dị ka mmanya dị nro. Know maara colas.- Ha bụ ndị a ma ama n'oge gara aga. 'digestive systems n'oge agbụrụ ahụ.
ugwu ugwu na-agbago hawaii
Mgbe anyị nwere ọtụtụ nri acidic ọ nwere ike imetụta ụzọ sistemụ nri anyị si arụ ọrụ. Otu iko soda pop, mana ihe kpatara na anyị anaghị enye ya ndị ọkwọ ụgbọala bụ n'ihi na ihe anyị na-achọ ikwu anaghị akwado ihe anyị chọrọ iru n'ụlọ nkwari akụ ahụ, ha nwere ike ịsị 'Oh god I need a can' wee gaa nweta otu, mana anyị anaghị enye ya dịka otu, mana anyị na-eji nke obere abịa na nkebi ugwu n'ihi na nke ahụ nwere ike bụrụ maka ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọ ala ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndụ ịchekwa ọbụlagodi na ọ kwadochaghị ihe anyị na-eme. ma na ọnọdụ a ọ na-akwado arụmọrụ nke ụmụ okorobịa ahụ ma enwere naanị ọtụtụ ihe ị nwere ike ịsị na ị nweghị ike - ee ee nke ọma Daalụ maka nke ahụ. Nnukwu nkata na gị dịka mgbe niile na ee, na-atọ ụtọ. - Ọ dị mma. - Daalụ nke ukwuu maka nke a.
Ekele dịrị Nigel maka nghọta ya n'ihe ndị ọkachamara na-anya ụgbọ ịnyịnya na-eri. Echere m na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ma echere m na ozi ndị a na-ewepụ bụ na ị ga-eri ọtụtụ ọtụtụ, ọtụtụ ezigbo nri dị mfe igwu ala, mana ọ dịkwa mkpa mgbe ị ga-emezigharị ihe na ebe ndị ọzọ ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe. Ọ na-atọkwa ụtọ ịhụ na ndị na-azụ ọzụzụ na ndị na-edozi ahụ na-elele ihe anụ ahụ chọrọ kwa ụbọchị n'ihi na ụbọchị na-adịkarị iche na data arụmọrụ yana nri ndị na-akwa akwa dabere na ya.
Na ịhụ isiokwu ndị ọzọ gbasara nri na-edozi ahụ maka ịgba ịnyịnya ígwè, pịa nnukwu pink EF Mmụta Akpa ụgbọala mbụ n'azụ m.
Ọnye na-bụ Chris Froome nọ na-agba maka afọ a?
Mba Israel bidoro akwadoro nke aChris Froomeganọkwasinjem 2021 Tour de France. Onye mmeri nke oge anọ ga-abụ onye isi ndị otu ụzọ na uchenọkwasina-akwado Michael Woods onye ga - eduga ndị otu na Grand Tour nke abụọoge.06.15.2021
Nabata na GCN Racing News Show. Ozi kachasị na ụwa ịgba ọsọ izu gara aga bụ egwu Chris Froome dara na Criterium du Dauphiné. Aga m ekwu maka ihe ọ pụtara nye ya, ndị otu ya na njegharị ahụ.
Enwekwara ọdịda, esemokwu na mmeri na-emebi ihe na Tour nke Belgium, onye mmeri ama ama na OVO Women's Tour, mmalite nke Tour de Suisse na ile anya na kpakpando nke ọdịnihu na Baby Giro. Anyị ga-amalite site na Criterium du Dauphiné, ebe a na-eme ka ụwa niile gbaa gburugburu n'ụtụtụ nke oge nke anọ na Roanne. Chris Froome, onye ya na onye otu ya bụ Wout Poels nọ n’ihu egwu ahụ dara na mgbidi dị na 55 km / h - oke ikuku nke mere ka ọ ghara inwe nguzozi mgbe ọ napụrụ ogwe aka ya na ogwe ahụ iji kpoo imi ya.
O were awa ole na ole tupu ọnọdụ ahụ jọgburu onwe ya. O doro anya ozugbo na ọ gaghị esonye n'ọsọ ahụ, mgbe ahụ, e gosipụtara na ọ gaghị esonye na Tour de France, na mgbe e mesịrị, mgbe oke mmerụ ahụ pụtara, a jụrụ ya ma ọ ga-aga mpi ga-agbake 100% ma ọ bụ. Ihe mmerụ ahụ dị ọtụtụ - mgbaji ọkpụkpụ nke femur, mgbaji agbaji, mgbaji agbaji, ọgịrịga na olu, na akpa ume.
Ọ tụfuru ọbara 4 lita n'ihe ahụ merenụ, dịka Froome n'onwe ya kwuru, ọ nwere ihu ọma na ọ ga-adị ndụ ịdị. Mgbe ọ bịarutere n'ụlọ ọgwụ St Etienne, a kpọgara ya na ngalaba kpụ ọkụ n'ọnụ ma waa ya awa 8.
Ndị dọkịta na-awa ahụ kwuru na ọ nwere ike ịlaghachi na igwe kwụ otu ebe na ọnwa 6, mana isi Froome ga-adị na-adị mma. Ọtụtụ ndị ekwuola na nke a nwere ike ịbụ njedebe nke ọrụ ya, yana maka ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọ ala, ọkachasị na afọ 34, enwere ike ịsị na ọ nwere ike bụrụ, mana Froome, dịka ndị otu ya na ndị ọrụ ibe ya ga-agwa gị, nwere otu ọla mkpebi siri ike karịa nke ọtụtụ mmadụ, na ọbụnadị nke ọtụtụ ndị egwuregwu na-eme egwuregwu. Yabụ ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ike izuike wee laghachi na mma ya, ọ bụ ya.
Anyi no na GCN ga acho iziga ya na ezi na ulo ya ihe oma, ka odi nke oma Chris. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ nọghị na-eche maka agbụrụ n'oge ahụ, obi abụọ adịghị ya na Tour de France agaghị adị otu ma ọ bụrụ na ịnweghị ya. N'agbanyeghị ọnụnọ nke Geraint Thomas na Egan Bernal, Team Ineos “Ndị na-asọ mpi a ga-enwekwu mkpali iji nweta eziokwu ahụ bụ na ọkacha mmasị agaghị anọ tupu ọsọ ahụ.
Ọ nwere ike ịpụta na anyị nwere agbụrụ kachasị emepe na afọ. Agbanyeghị, ọ bụghị akụkọ ọjọọ niile maka Froome n'izu gara aga mgbe ọ pụtara na ọ nwere ike merie agbụrụ site na akwa ụlọ ọgwụ ya. Spanish telivishọn kwuru na Thursday na Juan Jose Cobo nwere ihe na-ezighi ezi na paspọtụ ndu site na 2011, afọ ọ meriri Vuelta a Espana.
Nke a bụ nsonaazụ nke nyocha na ọrụ UCI kemgbe 2015. Dabere na nsonaazụ nke arịrịọ, ọ bụrụ na Cobo mee otu, Cobo nwere ike ime Froometo onye mmeri, na-eme ka ọ bụrụ onye Britain mbụ meriri Grand Tour. O nwekwara ike ibute Bauke Mollema na naanị Grand Tour ikpo okwu ya ọ nwekwara ike ịpụta na Lloydy ka ọ dị mma site na 130th ruo 129th na ọkwa Alpe d'Hu ez nke Criterium du Dauphiné 2010.
Ekele dịrị Cillian Kelly maka nke a, mere anyị niile ọchị. N'ikwu okwu banyere Dauphiné, anyị kwesịrị ileba anya n'ihe mere n'ọsọ ahụ n'onwe ya bụ ngosipụta nke ịkpa ike maka Wout Van Aert. Ọ bụ nke abụọ n'ihu Sam Bennett na njedebe nke agba nke atọ, na mgbe ahụ, iji gosipụta ntụgharị ya, ọ gara n'ọhịa n'echi ya na mmeri WorldTour mbụ ya .. na oge ikpe ebe ọ n'ezie gbaghaa ndị ọzọ nọ n'ihu.
Ọ bụrụ na nke ahụ ezughi oke, ọ kwadoro ya na mmeri nke abụọ n'echi ya na ọkwa ọzọ. Ọ bụrụ na enwere mgbe ị ga - esi nwetaghachi onye ọkwọ ụgbọala ahụ site na GCN n’izu a, ọ bụ ya - emechara nke ọma. Ọfọn, dị ka Dan kwuru na Twitter, ọ na-enye gị nkwanye ùgwù ọhụrụ maka onye ọ bụla mechara egwuregwu cyclocross ọbụna dị nso na van Aert ma ọ bụ van der Poel. ọ dị mma ịhụ otú van der Poel si weghachi otuto o nwetara site na van Aert. natara maka mmeri MTB World Cup ya na izu ole na ole gara aga.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ihe gbagidere n'ezie. Julian Alaphilippe nwetara mmeri nke ọfụma n'ụbọchị nke ise wee rute Gregor Muhlberger nke ọma, ebe Jakob Fuglsang dọpụrụ uwe onye na-acha odo odo n'ubu Adam Yates, n'okpuru ọnọdụ Akwụkwọ Nsọ, na ngwụcha na Pipay n'echi ya. Oge a nyere Team Ineos ihe mere ha ga-eji mee ememme, ha meriri n'ọkwa ahụ site na mbuso agha nke Wout Poels na usoro na-esote ya na arụmọrụ pụrụ iche nke Dylan van Baarle mere.
Ọ gafere Jack Haig, onye onye otu ya bụ Yates dabara na ntabi afọ tupu ụbọchị ahụ, nke mere ka ọ kwụsị ịgba ọsọ ahụ, bụ onye ndu Jumbo Visma GC bụ Steven Kruijswijk, onye tara ahụhụ site na afọ ya. Nke ahụ mere ka ọ dịtụrụ Astana mfe, ma n’ikpeazụ, ha enweghị nsogbu ịgbachitere ụzọ Fuglsang, onye were mmeri nke abụọ nke 2 n’ọsọ ahụ n’ime afọ atọ. Nke ahụ bụ mmeri mmeri nke Astana nke iri nke oge a, nke, dị ka Cycling Visualizations na Twitter, setịpụrụ ndekọ maka narị afọ a, ọ bụ ezie na anyị nọ na ọkara n'etiti afọ.
Radioshack, BMC na Sky niile mere ya 10 mana karịa Otu oge. Ka ọ dị ugbu a anyị eruola afọ nke ọtụtụ maka Remco Evenepoel na njem nke Belgium. Ekwuru m, na m na-ekwu na ọ bụ ọtụtụ mmadụ, ọ ka dị afọ iri na itoolu na otu afọ mbụ, mana site na mmeri nke ọkwa na ọkwa zuru oke, ọ kwadoro ihe anyị tụrụ anya na ya.
Na nke 1, Jan Willem Van Schip meriri, bụ onye jisiri ike pụọ na otu nkewapụrụ ngwụsị iji wee kwụsị otu ahụ. O doro anya na onye Dutch mara amara nke ọma maka njiri aka ya pụrụ iche - nchụso nke ikuku anaghị adabara onye ọ bụla, Adam Blythe so na ndị na-ekwu na ọ nweghị nchekwa mana n'oge ahụ ọ rụpụtara nke ọma, Ashe enweghị ebe ọ bụla - ọ dị oke elu ma sie ike, ha enweghị ike ijide ya. N'echi Evenepoel bụ onye mmeri ọkachamara mbụ.
N'oge ụfọdụ ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere - ọ chịrị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ agbụrụ ọ bụla dị na nwata n'afọ gara aga, ị gaghị atụfu talent ahụ na mberede. Mmeri ahụ pụtara n'ụzọ nkịtị n'ụzọ ụlọ, ebe ụlọ ya dị naanị 30 kilomita site na ebe a na-aga. Nwa okorobịa ahụ bụ onye Belgium wakporo xkm site na njedebe ma bụrụ onye na-ejide ihe ndekọ oge awa bụ Victor Campenaerts.
Ruo mgbe nke ahụ mere. Ouch. Ga-eche na ọ ga-enwe usoro zuru ezu iji mee ntụgharị ekpe.
Campenaerts kwuru mgbe ọkwa ahụ hụrụ na ọ hụbeghị onye ọ bụla na-agba ọsọ dị ka Evenepoel. Na mbụ na otu ogbo, mere a iju merenụ. Nke ahụ bụ Nathan Van Hoydonck, onye na-anọpụ iche na Shimano jụrụ ịnyịnya ibu ọzọ mgbe ọ tụbara ụkwụ ya nke mebiri emebi na ụgbọ ala otu.
Iji mee ihe ziri ezi na onye Belgium, ọ rịọrọ mgbaghara na Twitter ma kwuo na ya nwere nkụda mmụọ n'ihi na ụgbọ ala na-anọpụ iche agafewo ya na taya dara ada wee kwụsị naanị 300m elu n'okporo ámá ahụ, na-akọwa. Ka o sina dị, laghachi n'ọsọ ahụ, ajụjụ a bụ ma Evenepoel nwere ike ịkwụsị nnukwu egbe na oge ikpe 3 oge azịza ya bụ 'ee' nke na-ada ụda - ọ gwụchara nke anọ. Na kama ịdabere na nsogbu ya n'echi ya, ọ na-eji ọgụ dị ka ihe nchebe ya kachasị mma, dọta otu mmadụ atọ na-enweghị mmejọ, gafere ngwụcha ma gbasaa ọkwa Racelead ya dum - oge a bụ ihe enyemaka maka Campenaerts, bụ onye meriri onye otu ya Wellens nke oge ya.
Ikpeazụ ogbo ahụ merụrụ ahụ site na egwu ahụ dakwasịrị n'ụlọ ahụ: ọ dabara nke ọma, dị ka anyị nụrụ, ọ nweghị onye kwenyere na Evenepoel, bụ onye mechara bụrụ onye mmeri kachasị nke ihe omume ahụ, na ọkwa nke Bryan Coquard meriri. Wout van Aert mere njem nlegharị anya abụọ na ụbọchị ole na ole na mgbe Remco Evenepoel dị afọ iri na ụma meriri na Belgium, ụfọdụ n'ime 'ụmụ nwoke ochie' amalitela mmeri. Enwere m ntakịrị nkụda mmụọ na ego ndị a na-eto eto na-abata ma merie ihe niile like .. dị ka ọkacha mmasị anyị -Social media na-akọwa Thomas De Gendt.
Ọ bụ n'ezie ikpo okwu ndị Belgium, yana ebe nke abụọ na nke atọ na-aga Campenaerts na Wellens. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihe akaebe ọzọ na ndị na-agba ịnyịnya ígwè nwere ike ịme okporo ụzọ ụwa, Telenet Fidea Lions 'Belgian Toon Aerts nọ na nke anọ - Aerts nwere ike ịbụ onye kachasị nso na van Aert na van der Poel na cyclocross ugbu a, mana ha adịghị ka ha , o yighị ka ọ nwere mmasị n'ịtụgharị oge niile n'okporo ámá, naanị ihe ọ masịrị iji Itas bụ ọzụzụ. Fọdụ ndị nwere oke onyinye.
Njem Nleta Women'smụ nwanyị nke Ovo Energy na Great Britain bụ nkwụsị na-esote na World World Tour, nke ruru ụbọchị isii, na-ekpuchi 790 kilomita wee kwụsị ụbọchị abụọ epic na ugwu Welsh. Fọdụ n'ime ndị na-arị elu gbagoro ịwụsa agbụrụ ahụ na nkwadebe maka Giro Rosa na-abịanụ, mana anyị nwere ọnụnọ nke Vos, Moolman Pasio, Deignan na Longo Borg hini, n'etiti ndị ọzọ, na ọkwa nke otu na-agba ọsọ, nke Jolien D meriri. 'Hoore onye meriri ụbọchị mmeghe n'afọ gara aga, Agba nke abụọ ga-abụrịrị ihe ijuanya nye ọtụtụ na ikekwe ndị na-agba ịnyịnya kwesịrị ịmụrụ anya. Kent Cyclopark bụ otu ebumnuche UK wuru ụzọ egwu na-emechi emechi nke ndị UK na-akwado cyclocross na Jenụwarị, Marianne Vos gosipụtara nka ya site na ịgbanye ịnyịnya ígwè nke yiri okirikiri nke batara n'otu n'ime oghere na-agba ọsọ. ezigbo na nnukwu! Ọ gara n'ihu sọfụ ndu ọ bụla, agbanyeghị na etinyere ya n'ọgwụgwụ, ọ chọghị ọkpụkpọ oku nke abụọ mgbe oghere mepere n'ihu ya na ụdị ụghalaahịa ya were merie ọrụ 350th na ngalaba niile yana ya na ndị isi. na isi jerseys.
Onye elu dị elu na-esote ozugbo dị ala, mana mgbe enwere nnukwu ọdịda ebe a na ọtụtụ ndị ọzọ n'echi ya. N'ezie, ihe mberede ahụ jọgburu onwe ya nke na ndị na-ahazi ọsọ ahụ mere mkpebi ịkwụsị ịgba ọsọ ahụ ebe a na-elekọta ndị merụrụ ahụ. O di nwute na o bu njedebe nke uzo maka Marianne, onye ghapuru ndi ozo 8.
Mgbe ọ malitere, Jolien D'Hoore gbara okpukpu abụọ maka mmeri ọzọ. Oge nke anọ bụ nke mbụ emechara ugwu na akụkọ ntolite ahụ. Mwakpo nke Elisa Longo Borghini rutere n'elu nke mbụ nke ngwụcha kpochapụrụ otu ìgwè dị egwu gụnyere Kasia Niewiadoma, Deignan na onye mmeri German bụ Lianne Lippert na ịrịgo nke Canyon SRAM, ndị Poland bidoro ịlụ ọgụ maka otuto o kwesịrị tupu Lippert anabata.
Agbanyeghị, usoro abụọ kachasị sie ike n'ịgba ọsọ na-aga n'ihu. Oge a na-enwe ọfụma nwere ugwu abụọ 1 na-arịgo elu na ọtụtụ nke ugwu na-enweghị atụ. E jidere mwakpo mbụ na pusi nke abụọ 1 na Epynt.
bụ ụtọ nduku mkpali
Lizzie Deignan bụ onye ọzọ na-agba ịnyịnya nke Niewiadoma jidere ma gbasaa ya, ya na Elisa Longo Borghini sonyeere ha. Niewiadoma nọ na-agba ọkụ na agbanyeghị na Deignan ga-egwu ala iji soro ha nọrọ, o gosipụtara na ọ laghachịrị na ọ kachasị mma site na ị nweta mmeri mbụ ya kemgbe afọ 2017 ịmụ nwa. N'ụzọ kwere nghọta, ọ bụ mmeri mmetụta uche, dị ka isiokwu a sitere na Trek Segafredo na-egosi.
Ka osinadị, ndu ha gbasara Niewiadoma na GC pere mpe ka ọ na-erite, otu sekọnd !! Nwere ike ghara ịrịọ maka a ọzọ na-akpali akpali ndapụta maka ikpeazụ ogbo. N'ebe ikpeazụ a, otu ndị na-agba ịnyịnya iri na otu wee mechaa n'isi ụtụtụ, gụnyere onye otu Deignan Ellen Van Dijk na Niewiadoma na-eguzosi ike n'ihe Lieutenant Hannah Barnes, uru nke Trek bụ na ha kpochapụrụ ego sekọnd ahụ na nke mbụ. Ọ laghachiri azụ na nke abụọ, n'agbanyeghị, ebe ọ were Deignan nke abụọ iji mee ka ọ baa uru abụọ.
E jidere mbubreyo nke Ale Cipollini's Nadia Quagliotto na Grace Brown nke Michechelton ka peloton ruru kilomita ndị ikpeazụ na Pembrey Country Park, akara njedebe na Welsh Cyclingsown's nzube wuru igwe kwụ otu ebe. Ha lụrụ ọgụ maka ịdị elu n'elu ma na ngwụcha ọrụ aka, ChristineMajerus dị ebube n'isi ya wee nyefee onye otu ibe ya bụ Amy Pieters maka mmeri nke atọ ya na OVO Energy Women's Tour, na-enweta mmeri ya nke abụọ ma na-egosi nloghachi ya n'elu. Ọ na - esonyere otu ndị nne ama ama dịka Kristen Armstrong, Marta Bastianelli, Dame Sarah Storey, na Laura Kenny - ọmarịcha Lizzie! Na Froome kwụsịtụrụ maka oge ahụ, ụdị nke Geraint Thomas na Egan Bernalare na Tour de Suisse ga-abụ ihe na-atọ ụtọ karị.
Oge ịgba ọsọ 9 malitere na nnwale oge dị mkpirikpi na Satọde. N'ihi amụma mmiri ozuzo maka akụkụ ikpeazụ nke ogbo ahụ, ọtụtụ n'ime ọkacha mmasị ịgba ọsọ na-ahapụ n'isi ụtụtụ. Na njedebe, 5 kacha elu bụ naanị 5 sekọnd dị iche, onye na-akwado ụwa oge oge RohanDennis meriri mmeri site na obere nke abụọ n'ihu Maciej Bodnar si Bora Hansgrohe.
N'ime ndị ọkacha mmasị GC, ọ bụ Thomas chụpụrụ n'ụlọ na 13 June, 6 sekọnd n'ihu onye otu ya Bernal. N’abalị nke abụọ nke ụnyaahụ, Luis Leon Senchez batara n’ọganihu ahụ. Spaniard wakporo 11km site na njedebe ma jisie ike ijide 6 sekọnd ka ọ na-agafe akara nkwụsị na mmeri Astana 28th nke oge ahụ.
N'azụ Sagan meriri n'ọgba egwuregwu ahụ, mana anyị nwekwara onye ọhụụ ọhụrụ, KasperAsgreen si Deceuninck Quickstep, n'ihi obere ego elekere ọ nwere na mbụ. Ọsọ ahụ na-aga n'ihu ruo ụbọchị Sọnde, U23 Giro d'Italia na-ewere ọnọdụ ugbu a, agbụrụ a na-enyekarị ihe ngosipụta dị mma maka onye ga-enwu gbaa n'ọkwá ahụ n'afọ ndị na-abịa. Ọ nweghị ike ịmalite karịa maka Team GB, usoro atọ mbụ.
Ethan Haytor meriri okwu mmalite na ogbo 1. Onye bụbu onye mmeri ụwa na egwu ahụ, echere m na anyị nwere ike ịtụ anya na ọ ga-atụgharị pro n'afọ ọzọ. Mgbe ahụ, onye meriri 21 gbara Matthew Walls meriri agba nke abụọ, mana agba ọsọ a kwụsịrị ụnyaahụ na nke anọ, nke gụnyere mpaghara 5 nke ụzọ ahụ n'okporo ámá nke Strade Bianche.
N’ebe ahụ ka onye Italia nke aha ya bụ Fabio Mazzucco gafere akara ngwụcha ihe karịrị otu nkeji n’ihu onye ọ bụla wee were agba nke onye na-agba ọsọ n’ihu Mazzucco solo, o leghị anya n’azụ. Ọsọ ahụ na-aga ruo ụbọchị Sọnde, mana site na ndị bịara taa na nke echi ị nwere ike ịtụ anya nnukwu ọgba aghara na izu GC, anyị bụ ndị ikpeazụ na ndị ọzọ nke Tour de Suisse, Baby-Giro, Tour de Slovénie na Route d 'Occitanie Preparatory agbụrụ maka ndị njem Tour de France, azụ Ka ọ dị ugbu a, maka ọdịnaya ndị ọzọ, pịa ebe a ka ị hụ ọhụụ American Gravel Ride - Si na akụkọ banyere cyclocross na onye ọhụụ GCN Jeremy Powers na isiokwu ị nwere ike ịhụ n'okpuru nwere ike ịchọta.
Nye kacha nwee ịnyịnya ígwè n’ụwa?
1. Peter Sagan nde euro 6.
N'isiokwu a, anyị ga-agabiga ụfọdụ n'ime ndị kachasị mma ugwu oge niile. Ndị na-agba ịnyịnya nwere oke ike-ibu-ibu ndị ọkachamara n'ịrị ugwu na ọsọ ọsọ dị egwu. (Booming) Anyị gawara ịdepụta aha mmadụ asaa kachasị ugwu na oge niile, mana ka ị pụrụ iche n'echiche, igbutu ya n'ọnụ ọgụgụ ahụ siri ezigbo ike.
Tupu anyị amalite, enwere m nkwupụta na m ga-agụpụta n'olu dara ụda banyere ọmarịcha ịgba ọsọ, ịnagide ntachi obi na ike egwuregwu. Ọ bụrụ na anyị jigidere ndị ọkwọ ụgbọ ala asaa, a ga-ahapụrịrị ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọ ala dị ukwuu. Na mgbakwunye, iji ọgbọ atụ atụnyere bụ ebe a na-egwu ala.
Ọ gaghị ekwe omume ịmata etu Chris Froome ga-esi megide Eddy Merckxor ma ọ bụrụ na Pantani Coppi kwụsịrị; gia agbanweela, ọduọ agbanweela, okporo ụzọ agbanweela na ebupụta na-abụkarị nke ọma karịa gravel ụzọ taa 1920s. Ọzọkwa maka nnukwu akụkụ nke akụkọ ntolite egwuregwu, ọgwụ ọgbụgba adịghị gburugburu. Ozugbo ngagharị ahụ gwụchara, ka anyị bido. Nọmba otu na ndepụta anyị bụ Marco Pantani.
Otu n'ime ndị kasị pụrụ iche ugwu nke ya ọgbọ. Ugbu a ndị havetali nwere okwu maka onye na-arị ugwu na nke ahụ bụ Scallatore, aha ọzọ maka ndị na-arị ugwu dị ka Pantani, nke ahụ bụ Scatista. Nke a bụ okwu enyere ndị ugwu nwere ike ime ngwa ngwa ọbụlagodi na ndagwurugwu dị elu ma na-egbukwa ndị ha na ha na-agba.
Ugbu a Pantani na-achọpụta ya ozugbo site na isi nkwọcha ma ọ bụ mkpuchi isi, ntị na ntị na goatee a na ọdịdị ya wee nweta ya aha otutu, el pirata ma ọ bụ paireti. A makwaara ya nke ọma maka ụdị ịrịgo ya, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ site na sadulu na tụlee. Mana ọ bụghị ọdịdị ya ma ọ bụ ụdị ịrịgo ya.
Ihe mere o ji buru ibu bụ na ọ nwere ike ịrị ugwu dị ka shọvel. Ọ bụ ikike a mere ka ọ nwee ike imeri ihe a na-adịghị ahụkebe, Tour de France na Giro d'Italia, n'otu oge ahụ, laghachi na 1998. N'afọ sochirinụ, na 99, ọ chịkwara Giro d'Italia ọzọ, meriri anọ oge ọ nọ n'isi ndu ahụ mana mgbe ikpe ọbara na-agba ọbara laghachiri hematocrit ya dị oke elu wee chụpụ ya n'ọsọ ahụ Pantani anaghị abụ otu onye na-agba ịnyịnya ọzọ ma nwụọ nke ukwuu na ọ tara ahụhụ site na nsị cocaine dị ukwuu. na 2004. (egwu na-ada ụda) N'oge a, Chris Froom na-achịkwa Grand Tours.
Ruo ugbu a ọ merie Tour de France ugboro anọ, merie Giro d'Italia na 2018 wee merie Vuelta a Espana, ugbu a ugboro abụọ. Ozugbo ihe gbagoro, Chris Froome yiri ka ọ nwere uru. Ọ bụ na Kenya ka Froome mụtara site na ọkwa ugwu ya, onye kwuru na ya nọrọ ogologo oge n'ugwu Nairobi.
Mgbe ụfọdụ ọ na-ama ụlọikwuu n'ebe ahụ. Ma nkwa ya na isi ike ya abụghị naanị na igwe kwụ otu ebe, kamakwa anya. O doro anya n'otu oge o jiri akaụntụ Hotmail nke Kenya na-ezigara ndị otu egwuregwu egwuregwu, UCI, gwa ha na Kenya ga-eziga otu U23 na World Championship.
Ugbu a enwere m ike ikwu n'ụzọ doro anya na ụdị Froome na-arịgo isi ya na ikpere aka ya agbatịghị adịcha mma. Nke mbụ a bịara mara na Vuelta a España na 2011, bụ ebe o mechara bido nke abụọ mana ọ bụ onye a kwalitere n'oge na-adịbeghị anya nye onye mmeri nke agbụrụ ahụ. N'afọ sochirinụ, ọ nyeere Bradley Wiggin aka inweta aha 2012 Tour de France, na-emecha nke abụọ na usoro ahụ, mana ọ bụ na 2013 ka o mere aha maka onwe ya.
Ọ nweghị ike ịkwụsị mmeri nke Oman site na mbido afọ a. Ọ nọ na Critérium International, Tour de Rome ma mee Critérium du Dauphiné na n'ezie Tour de France. N'ezie, ọ bụrụ na ịwepụ Lance Armstrong na akụkụ ahụ, n'afọ na-eso ya ọ ghọrọ onye mbụ na-agba nke ọma iji chebe aha ya nke ọma kemgbe Miguel Indurain na 1995.
Kemgbe ahụ, ọ meriri njem abụọ ọzọ site na Fra nce, na afọ gara aga ọ ghọrọ onye mbụ na-agba ịnyịnya iji jide aha atọ Grand Tour n'otu oge ahụ kemgbe Bernardino 1983. (egwu na-ada ụda) enweghi ike ịnwe ndepụta nke ndị kachasị mma n'ụwa. na-enweghị nwoke a Federico Bahamontes. Ọ ghọrọ onye mbụ na-agba ịnyịnya na akụkọ ihe mere eme iji nweta ọrụ atọ, merie asọmpi Eze nke Ugwu na Grand Tours atọ ahụ.
Ọ meriri Tour de France na 1959, n'ezie ọ meriri Eze nke Ugwu, na n'ezie ọ meriri ihe nrite Eze nke Ugwu na-erughị ugboro isii na Tour de France naanị. O nwere aha otutu, nke ahu bukwara Igwe Ugo. Toledo bụ obere ógbè dị n’etiti Spen ebe ugo si abịa n’ihi na mgbe ọ bụla ụzọ gbagoro, ọ ga-efe dị ka ugo.
Enwekwara ihe ncheta nke Bahamontes dị na Toledo, nke Fundacion Sulest nyere site na ya iji gosipụta na ịsọpụrụ ihe niile ọ rụzuru na igwe kwụ otu ebe. Ọ ka na-arị ugwu ruo taa. Kedu akụkọ akụkọ akụkọ zuru oke. (egwu na-ada ụda) Naanị ndị na-agba ịnyịnya abụọ na akụkọ ntolite enwetala mmeri nke Eze nke Ugwu na njem atọ a dị egwu, yabụ ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ha abụọ.
Gaa n'ihu, Luis Lucho Herrera. Ọ karịrị ụfọdụ ndị oge ahụ, gụnyere Sean Kelly, Bernardino na Laurent Fignon. Na 1984 ọ nara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmeri kachasị mkpa maka ịgba ịnyịnya Colombia, ọ bụ ya mbụ Tour de France, ọ bụ 17th ogbo ọ kwụsịrị na Alp d'Huez.
N'ebe ahụ, ọ wakporo ma daa ụfọdụ nke oge. Vignon, Ena, na Robert Miller kwa, na isi ha ahụghị ya anya ọzọ. Na 1987, agbanyeghị ọkwa ya dị ka onye nwere akụkọ ifo ugwu site na ị ghọrọ onye South America izizi iji merie Grand Tour nke bụ Vuelta.
Ọ bụ ezie na ọ dị nkeji atọ megide Sean. Kelly furu efu n'oge ikpe. Agbanyeghị, ozugbo ụzọ ahụ kpọdatara, ọ gaghị eleghachi anya ma lụso ndị na-asọ ya ọgụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ohere ọ bụla, ọbụnadị na ọkwa 11 nke Lagos de Covadonga gwụchara.
N'ebe ahụ, ọ wakporo ndị na-asọ mpi ya ọzọ, merie ebe ahụ ma werekwa oge zuru ezu ịghọ onye mbụ Colombia na-agba ịnyịnya na-edu ndú na Grand Tour. O siri ezigbo ike ikwubiga ókè Herrera dị mkpa na ịgba ígwè Colombia. Na isi, otu ndị Colombia na-arị ugwu ugbu a na-agbaso ụzọ o jere ha na 1980s. Nwoke a nwere ike ịbụ ezigbo esemokwu maka ịbụ onye na-agba ọsọ Spanish kacha mma n'oge niile, mana ọ bụghị maka mmeri 1973 Tour de France ma ọ bụ 1970 Vuelta na Ocana dị na ndepụta anyị.
More n'ihi na ọ na-eme ihe ike mgbe ya na Jose Manuel Fuente wakporo Col du Galibier na Col du Télégraph wee nweta minit asaa na ndị kachasị ike ha. Otú ọ dị, maka m, ọ bụ na 1971 ka o gosipụtara ọkwa ya dị ka akụkọ ịrị elu. N'ikpeazụ, ọ ghaghị ịhapụ uwe ojii.
Mana njigide ya amaliteghị ruo oge asatọ nke kwụsịrị Puy de Dôme. N'ebe ahụ ọ hụrụ ihe ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọ ala ndị ọzọ na-anaghị ahụkarị, na Eddy Merckx adịghị ike. Ọ wakporo wee gaa na Windsor ogbo, ọ bụ ezie na ọ gwụchara 15 sekọnd na Merckx, nke ahụ bụ isi ihe ịrịba ama nke ọdịnihu.
Agbanyeghị, ọ nọ na ogbo 11 ebe o gosipụtara klaasị ya. Ogologo ugwu dị mkpirikpi nke dị kilomita 134. Mgbalite mbụ nke ụbọchị, site na Joaquim Agostinho.
N'ụzọ dị ịtụnanya, ha nwere ike ịhapụ Eddy Merckx ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo. Ma otu Ocana afọ ojuju na na, wakporo ọzọ na ụgbọala naanị 60 kilomita site n'isi. N'elu elu nke ụbọchị, ndu ya na onye na-agba ịnyịnya na-esote n'okporo ụzọ dị nkeji anọ ma ọ dị isii.
nri ndị gbawara abụba n’afọ
Onye mmeri nke Tour de France nke oge Louison Bobet kwuru na ihe ọ na-eme na ọkwa a dị ka ọfụma ọ bụla nke Fausto Coppi. Nke a bụ ezigbo ugwu. (upbeat music) N'uche nke m, onye ọ bụla na-agba ịnyịnya tosiri iji kpọọ aha 'mmụọ ozi nke ugwu' kwesiri ka m nwee aha na ndepụta a.
Charly Gaul bụ onye na-agba ịnyịnya ígwè si Luxembourg bụ onye gbara ugwu maka oge mbụ na 1950 na Tour nke Austria. Ọ bụ naanị afọ 17 mana ọ meriri ogbo na Grossglockner na-aga n'ezie dịka atụmatụ, ọ hapụrụ ọtụtụ n'ime ha, mana ọ bụ 1955 mgbe ọ tinyere nwamba ahụ n'etiti nduru. Ọ bụghị onye ukwu na ụlọ ahụ, nke ọzọ n'ihi otu ọmarịcha otu egwuregwu, mana ozugbo ọ gara n'ugwu na ugwu ugwu, ọ bịara uru ya.
E nwere ogbo nke gabigara Galibier na Col Du Télégraphe, ma ebe ahụ ọ na-ebugharị 14 nkeji na 47 sekọnd na ndị niile na-ama ya aka. Nke ahụ butere ya site na 37th GC gaa na nke atọ. Na mgbe agbụrụ ahụ kụrụ Pyrenees, malitere ịwakpo ọzọ wee merie 17th.
Onye mmeri Louis Bobet. Ihe ndị ahụ rụpụtara ya mmeri ọ bụla na asọmpi Eze nke Ugwu na nke atọ na ikpo okwu, nke ahụ bụ n'ezie otu ihe atụ nke otu Charly Gaul ga-esi nwee nnukwu mbịaghachi ka ọ gara ndekọ ugwu maka ịrịgo Mont Ventoux, otu awa nkeji abụọ na sekọnd itoolu, ma na-eche na elu adịghị mma n'oge ahụ, ọ dị ezigbo mma na ọ were Jonathan Vaughters afọ 31 imebi oge ahụ. Anyị nwere onye ọkwọ ụgbọ ala, onye meriri nhazi ugwu ugboro atọ na Gira Rosa ma meriekwa Grand Booke ma bụrụkwa nke kachasị ọsọ GCN na-eweta oge niile. N’ezie, a na m ekwu maka Emma Pooley.
Ugbu a, otu n'ime ihe ịga nke ọma ọ na-enwe na Giro Rosa 2014 laghachiri. E nwere ugwu ato gbagoro n’afọ a, tinyere ndị bịara n’ọgbakọ dị iche iche na nke asatọ na iteghete, na Emma meriri ha niile. O meriekwa ihe ịma aka Taiwan KOM ugboro abụọ, nke gwụchara na 3,275 mita karịa A n'ogo na Wuling Pass.
Na 2017, o tinyere 16 nkeji na onye ya na ya kachasị nso na nkeji 20 na Si 'Richardson, ọ bụ ezie na nke ahụ apụtaghị na ị bụ ọmarịcha ugwu. Ọ bụ ezie na ọ naghị enwe afọ ojuju na naanị ịbụ onye na-arịgo elu igwe kwụ otu ebe, ọ dịkwa mma na igwe kwụ otu ebe, ọ na-asọ mpi na ugwu triathlons ma na-eme Alpe d'Huez n'oge gara aga -Ọ na-agba ọsọ ogologo oge ma na-ekerekwa òkè n'ugwu ihe omume na-agba ọsọ. Dị ka anyị kwuru na ngosiputa na mmalite nke isiokwu a, ọ na-esiri ike iwepụta ndepụta nke asaa kachasị mma ugwu oge niile.
Ekwenyesiri m ike na anyị hapụrụ ụfọdụ ọkacha mmasị gị ma ọ bụrụ na anyị nweta ohere, mee ka anyị mara na nkwupụta ndị dị n'okpuru. Mana ọ siri ezigbo ike iji ndị ọkwọ ụgbọala tụnyere oge dị iche iche. Agbanyeghị, anyị nwere data GPS ugbu a.
N'ime afọ 50, anyị nwere ike iji ndị ọkwọ ụgbọala niile tụnyere afọ 50 sochirinụ, nke ga-adị mma. Ọ dị mma, ọ bụrụ na ịchọrọ ụdị uwe mwụda Spanish a sitere n'ike mmụọ nsọ nke m na-eyi ugbu a, ịnwere ike ịhazi ya ugbu a site na atshop.globalcyclingnetwork.com Enwere njikọ ya na nkọwa dị n'okpuru isiokwu a ma ọ bụrụ na ị ' Ọ masịrị m ịmụ otu esi eme ya You nwere ike ịmụta etu esi esi Emma Pooley gbagoro nke ọma! Isiokwu gị dị n'okpuru ebe a.
Peter Sagan net uru:Peter Saganbụ Slovak ọkachamara n'okporo ụzọ ịnyịnya ígwè onye nwerenet urunke $ 30.
(egwu siri ike) - Anọ m ebe nzuzo nzuzo ebe a n'ihu mbipụta 2019 Paris-Roubaix. Na m nwere ihe m na-eche bụ ihe kasị akpali akpali pro bike m na mgbe hụrụ. (Egwuregwu elektrọnik) Ugbu a, ihe mere m ji nwee obi ụtọ bụ na nke a bụ igwe kwụ otu ebe Peter Sagan nke na-abụkarị ihe na-atọ ụtọ.
Ma e wezụga, ọ bụ a ohuru, pụrụ iche Roubaix na nke ahụ bụ nke mbụ m na-ahụ ya. Amaghịdị m na ihe a na-apụta, ihe m na-ekwu bụ na ọ bụrụla afọ ole na ole kemgbe Roubaix mbụ kụrụ na ọ na-abụkarị ihe nrụpụta ngwaahịa dị obere. Mana chaị, lelee Roubaix ọhụrụ na Roubaix gara aga.
Na mgbe ahụ, m ga-ekwu maka ụfọdụ obere ihe na-eme ka igwe kwụ otu ebe a pụọ ​​iche na Peter Sagan. Nke mbu, anyi nwere Shock Future di n’elu tube tube maka inweta nkasi obi ozo mgbe inya ugbo ala. Gbanye ebe elu ojoo dika asphalt.
Ọ bụ ezie na ha gbanwere ya, ọ nwere mkpọchi ugbu a n'elu ka ị nwee ike igbachi nkwusioru mgbe ị na-anya ụgbọ ala ma debe ya nke ọma ka ị ghara inwe njem ọ bụla wee tụgharịa ya iji dozie ya. Nke ahụ mara ezigbo mma, ọ bụghị ya? Nnukwu mgbanwe ọzọ na-esote Roubaixi gara aga bụkwa ọdịdị profaịlụ tube. Yabụ ndị a dị ọtụtụ karịa ka ọkpọkọ ndị achọtara na ika ọhụrụ pụrụ iche.
Emeela ka ha nwee ike ịdị na mbara igwe karịa anyị nwere ike ịhụ na n'ime ala tube ebe a bụ oche oche, nke nwere ngalaba azụ azụ nke D, yana oche oche, nke bụ D. Ọ dị ka ọ bụ otu oche ahụ dịka ọ dị na asphalt, ugbu a ọkwa D bụ ihe anyị na-ahụ n'ọtụtụ igwe kwụ otu BMC na nnukwu igwe kwụ otu ebe yana ọ nwere ọtụtụ uru. Ọ bụ aerodynamic dịtụ ntakịrị, mana ọ dịkwa larịị na azụ ka ọ nwee ike ịgbagha ọzọ, nke dị oke mkpa maka nkasi obi ọzọ na agbụrụ dị ka Paris-Roubaix.
N'ikwu okwu banyere oche oche, ọ nwekwara njikọ edegharịrị na etiti. Nke a bụ ụdị dị iche iche karịa nke Roubaix gara aga. Ya mere, anyị nwere okpu polymer a nke ị nwere ike ịpụ ebe ahụ ị nwere ike ịhụ na enwere nnukwu oghere ebe ahụ, nke ezubere inye oche oche ntakịrị njem n'ime etiti ahụ na, nke kachasị mkpa, iji mee ka ọ gbalịa iji gbalịa na-abụ ihe ọma, ihe dị mkpa maka a agbụrụ dị ka Paris-Roubaix zuru ezu bụ nkwụsị igbe, nke ugbu a n'ezie neatly ruo eruo n'ime ala tube.
Ihe anyị hụrụ na a otutu nke ọhụrụ anyịnya igwe kama ịbụ imetosi n'okpuru azuokokoosisi n'oge gara aga. Mma. Ya mere, ndị a bụ isi ihe dị iche na nke abụọ Roubaix ọhụrụ ahụ na nke ochie Roubaix, mana nke a bụ igwe kwụ otu ebe Sagan, yabụ kedu ihe pụrụ iche gbasara ya, kedu ihe na - eme ya pụrụ iche? Ọfọn, ebe a bụ ọrụ agba agba pụrụ iche, nke ahụ bụ ihe anyị ji na Peter Sagan.
Nke ahụ bụ m mara mma nke ukwuu, ọ dị ịtụnanya na enwere ole na ole obere Peter Sagan logos enwere otu na aha obere aha mara mma nke na-egosipụta dị ka Sagans. E nwekwara obere eriri atọ dị na azụ ebe a na ọnụnọ agbụ ahụ. Obere rịbọnụ ọla a nke na-egosi mmeri mmeri atọ nke ụwa.
Richmond, Doha na Bergen, nke ahụ dị mma. Mana nke a bụ ọrụ agba agba dị omimi maka Peter Sagan. Ọ na-abụkarị anyị na-ahụkarị ọtụtụ atụmatụ dị oke njọ maka ya kemgbe ọtụtụ afọ.
Mana ọ masịrị m. Ebe ọ bụ na nke a bụ igwegharị igwe Roubaix nke Sagan, enwere mgbanwe igodo ole na ole ebe a dị iche na igwe kwụ otu ebe ọ bụla ọ ga - eji maka oge ndị ọzọ, dịka eziokwu ahụ na ọ nwere Dura Ace Di2 n'oge niile bụ ahụ maka ọgba tum tum ya niile. Ma crankset dị iche, yabụ kama 53/39 ya ọ nwere 53/44 n'azụ.
Roubaix bụ agbụrụ dị larịị ma ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya na-ahọrọ ịbịaru 53 nso na 44. (Egwu na-atọ ụtọ) Na azụ anyị nwere cassette 11/28 na ị ga-ahụkwa na e nwere ọsọ ọsọ seramiiki arụnyere ebe niile. Wiil ndị ahụ bụ taya tubular Roval 50 millimita ma jikọtara ya na ndị a bụ taya taya S-Works Turbo Cotton 30.
Ndị a bụ n'ezie oké, n'ezie sara mbara. Agwara m na nrụgide nke ga-asọba n'ime ya ga-adị n'agbata elekere anọ na ọkara na isii, ma ọ bụ mmiri maọbụ nke kpọrọ nkụ. N'ụzọ na-akpali mmasị, ndị ọrụ ụgbọ ahụ na-agwakwa m na n'ihi nkwụsi ike nke Future Shock, ha nwere ike itinye obere nrụgide na taya ma ọ bụrụ na ha chọrọ.
Sagan si sadulu nke oke bụ ọkachamara Romin EVO na ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị na ọ nwere oche oche oche azụ na akwa akwa azụ na ụgbọ okporo ígwè ozugbo. Ihe na-enye nnọọ ọtụtụ sag na uche m n'ihi na sadulu nwere obere ihe leverage. Na crank ị ga-achọpụta na ebe a bụ mita ike pụrụ iche, nke a bụ ngwaọrụ ntụgharị ihu abụọ.
Enwekwara pọd na crank n’akụkụ na-abụghị nke draịva. Na crank ogwe aka bụ 172.5 millimeters ogologo.
Dị nnọọ ka m. (Ọchị) Ma pedal ya adịghị ka m. M na-ejikwa pedal Dura-Ace, ma Sagan nwere ndị nwere ogologo 4mm axle, nke na-enye ntakịrị Q-ihe.
Kinddị ihe ezi uche dị na ya n'ihi na mgbe ị na-azọ ụkwụ ya ụkwụ, ọ dịka ọ ga - adịtụ obere, n'ezie. Na-akpali nnọọ mmasị. Ugbu a ruo n'ụlọ ọkpa ma achọpụtara m na ọ na-atọ ụtọ.
Ihe mbụ nke na - achịkwa anya bụ etu ogologo ya si dị, nke ahụ bụ 140 millimeters ogologo na ọ bụ S-Works stem nke nwere ezigbo mma n'èzí maka Wahoo BOLT. Nke ahụ masịrị m nke ukwuu, ọ dị mma nke ọma, ọ dị mma. Ma nke ahụ bụ ihe ngosi PRO Vibe 42 centimeter.
N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ bụ ogwe aka gburugburu n'oge a, mana maka Roubaix, ọ gara maka ụlọ ịgba gburugburu nke na-enye obere mgbanwe ma dịkwa ntakịrị ntụsara ahụ mgbe ijidere ya na mkpuchi. Ma otu n’ime ihe ndị kasị atọ m ụtọ bụ enweghị mgbanwe na ọdụdụ a. Na Roubaix anyị na-ahụ ọtụtụ teknụzụ dị egwu na ndị nzuzu ma mgbe mgbe ị na-ahụ mgbakwunye ndị ọzọ, ihe mgbakwunye mgbaji, teepu ejiri aka abụọ.
Mana nke ahụ dị mfe, M ụdị nke ahụ. Ma m na-amasị ya handlebar teepu, nke a bụ SUPACAZ handlebar teepu na ọ na-ele nnọọ nke nnyapade, mma ị nọ na-eche ihe size igwe kwụ otu ebe Peter Sagan agafe, ọ bụ a 56 nke bụkwa otu ihe ahụ dị ka m) Ọ na-akawanye. Ihe ọzọ dị iche na Roubaix gara aga nke m chọpụtara bụ enweghị ihu ihu na azụ ndị na-ebu axle.
Kama nke ahụ, ọ dị ka igwe kwụ otu ebe ndị ọzọ ebe ebe a na - ejide ihe na - ewepu iwe na ihu dị ọcha karị, ma ọ bụrụ n’ile anya na ọnweghị mkpịsị aka na - emegharị igwe kwụ otu ebe. Somefọdụ ndị na-eche na watt ma ọ bụ abụọ dị oke mkpa ma wepu wiil ndị ahụ ma ọ bụ gbanwee wiil ndị ahụ, ndị ọrụ ahụ nwere ụdị egbe pụrụ iche dịka nke ị hụrụ na Formula One. Enwere m ndị na-arụ ọrụ ugbu a ịtụle igwe kwụ otu ebe nke Sagan dịka ọ dị n'ụdị ọduọ zuru oke ma tụọ kilogram 7.91.
Ya mere, ọ bụghị a nku-ọkụ rịa igwe kwụ otu ebe, ma nke ahụ abụghị ihe ị chọrọ maka Roubaix na cobblestones, Olileanya na ọ bụ ya. Ugbu a, enwere m olile anya na ị nwere mmasị na edemede a ma ọ bụrụ na ọ dị, biko nye ya mkpịsị aka gị ma denye aha na GCN Channel n'ihi na ọ ga - enyere anyị aka ịmekwu isiokwu n'ọdịnihu. Ma, ka anyị mara na ihe ndị a n'okpuru ihe ị chere banyere nnukwu igwe kwụ otu ebe a.
Ahụrụ m ya n'anya, echere m na ọ dị oke mma ma m na-eche ma ọ ga-emeri na Sọnde? Ka o sina dị, maka inwekwu Paris-Roubaix- You nwere ike pịa na Sag's 44-ezé chaining maka ọdịnaya.
Kedu otu otu Chris Froome na-aga na 2021?
Chris Froomena-ekwu na ọ na-atụ anya iji Tour de France dị ka 'steepụ nkume' iji bịaruo ogo kachasị mma tupu mmerụ ahụ. Nwa nke 36 ga - abụ onye isi ụzọ maka Israel Start-Up Nation na Tour de France na Michael Woods iji duru ọkwa na izugbe.3. 3. 2021.
Kedu otu egwuregwu Chris Froome na-agba ịnyịnya maka?
Mba Ndabere nke Israelotuekwuputala usoro ha maka Volta a Catalunya nke nwere oge anọNjegharịsite na mmeri FranceChris Froomeesonyere Michael Woods, Dan Martin, na Daryl Impey.
N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, Eddy Merckx bụkasị ukwuu na-agba ígwè niile oge. Nwoke a na-akpọ The Cannibal bụ onye ọkachamaraịgba ígwèdị ka onye ọ bụla ọzọ ma merie agbụrụ dị mkpa ọ bụla ga-emeri.22.09.2017
Chris Froome ọ ka na-agba ịnyịnya ígwè?
Chris Froome(Israel Start-Up Nation) ekpughela na obukana nnukwu ihe mgbu mgbe ejidere gị na nchịkọta ikpo na Stage 1 na Tour de France. Onye Briton so na ndị na-agba ịnyịnya na-ekpochapu ebe 7.5km fọdụrụ n'oge oghe oghe na Saturday.06.30.2021
Kedu agbụrụ Chris Froome na-eme ugbu a?
Froome siOsoteagbụrụabịa n'ụdị Crit? rium du Dauphin? ma tupu nke ahụ, ọ ga-alaghachi na Tenerife maka ebe dị elu ebe ọ ga-anọgide na-arụ ọrụ na mgbake ya ma na-efunahụ akwara ọzọ ọ wuru n'oge mgbake ya.07.05.2021
Chris Froome ọ lara ezumike nká?
Chris Froomena-eche echiche n'ihuezumike nkána ego Hammerhead. N'ikwu okwu n'ihu ọkwa site na ogige ọzụzụ Tenerife ya,Froomezoro aka na ndụ mgbe ọ gbasịrị ọrụ ịgba ịnyịnya ígwè dị ka onye na-akpali maka mkpebi ahụ. 'Aghọtara m na m bụ akụkụ ikpeazụ nke ọrụ m,' onye mmeri nke Tour de France ugboro anọ kọwara.24 2021.